Ihe i nwere Maara Tupu Mortgage Refinance | Mortgage Loan na Mortgage Refinance
Ihe I Kwesịrị Ịmara Tupu Refinance nnyefe bụ
Dochie mbụ nnyefe iji nweta a obibi ọhụrụ nnyefe ka a na-akpọ refinancing. Refinancing bụ a nhọrọ nke na-nwere ike ime ka a na-agbaziri agbaziri iji nweta a dị iche iche na mma mmasị okwu na ọnụego. Mgbe mbụ Home ego na-akwụ ụgwọ ama, nke abụọ ego ga-ịmepụtagharịa na-eme ka a ọhụrụ nnyefe kama na mgbe ahụ na-atụba mbụ nnyefe pụọ.
Ọ bụrụ na borrowers nwere ezi Ebe E Si Nweta akụkọ ihe mere eme, ha refinancing pụrụ ịbụ ụzọ ka mma karịa tupu.
Ọmụmaatụ, Ha ọdịmma nwere ike tọghata a variable ego ọnụego ka a ofu mmasị na kwa nwere ike inwe a ala mmasị ọnụego. Ma ọ bụrụ na borrowers nwere ọjọọ n'aka ma ọ bụ ka nwere ukwuu ụgwọ na-aga, refinancing nnyefe ga-ize ndụ n'ihi na ha.
Na nke ọ bụla ọnọdụ akụ na ụba ma elu ọmụrụ nwa na ihe na-ejighị n'aka na aku na uba, ọ pụrụ ịbụ nnọọ ihe siri ike na-eme ka ụgwọ on a n'ụlọ nnyefe na pụrụ ịbụ sie ike karịa ị na-atụ anya.
Na ugbu a ị na-eche na ị na-ahụ onwe gị na ọnọdụ a??
N'ihi ya, ọ pụrụ ịbụ oge gị tụlee refinancing nnyefe.
Nke mbụ niile nke refinancing bụ ihe ize ndụ na refinancing ụgha n'amaghị. Ọ bụrụ na ị maghị kpọmkwem banyere refinancing, ọ nwere ike imerụ gị na-amụba gị mmasị ọnụego kama ẹsụhọde ya!
Ya mere, ọmụmaatụ, i kwesịrị ịma dịkarịa ala ihe ọmụma bụ isi dị ka atụnyere ugbu a udu nke ọ bụla lenders ma ọ bụ anoghi n'ulo oba nọ n'ógbè gị.
Gịnị bụ definition nke Refinancing?
Refinancing bụ usoro nke na-a ọhụrụ nnyefe ego maka mbenata kwa ọnwa ịkwụ ụgwọ site nwere ala mmasị ọnụego, na-ewere ego si n'ụlọ gị gị na maka nnukwu ịzụrụ ma ọ bụ na-agbanwe agbanwe nnyefe ụlọ ọrụ. Ọtụtụ ndị mmadụ na refinance nnyefe mgbe ha nwere hara nhatanha na ha n'ebe obibi ha, nke bụ ihe dị iche n'etiti ego ji na nnyefe ụlọ ọrụ na uru nke n'ụlọ.
unu ga- refinance nnyefe ?
4 ihe atụmatụ maka nnyefe Refinance
1. Mara onye ga-aka maka nnyefe Refinance
Ọ bụ ezie na e nwere ọtụtụ ndị ọkachamara maka nnyefe Refinance dị ka ezigbo ala na ụlọ Appraisers na nnyefe underwriters ndị ga-abịa na-arụ ọrụ dị mkpa na-arụ ọrụ, gị isi kọntaktị gị ga-abụ agbazinye mmadụ ego ụgwọ maka ụdị ọ bụla nke refinance. Ị ga-arụ ọrụ apụ na gị agbazinye mmadụ ego ụgwọ site na nnyefe Refinance usoro. N'akụkụ aka nke ọzọ, gị agbazinye mmadụ ego ụgwọ ga-arụ ọrụ na a otu ndị a ga-aka na azụmahịa gị nke nnyefe refinancing. Ọ bụ ezie na ị gaghị izute niile nke metụtara mmadụ, ọ bụ nnọọ ihe dị mkpa na ị kwesịrị ịma ha ọrụ nke nnyefe refinancing.
Agbazinye mmadụ ego ụgwọ ma ọ bụ Loan mara onye bụ onye ahụ ga-inwale Ebe E Si Nweta, ego, na ọrụ ọmụma ahụ ma ọ bụrụ i ruo eru maka a Refinance. Mgbe ha mezue ha nwale, ha ga-enye gị ego nhọrọ na-enyekwara gị aka ruo mgbe unu nnyefe ngwa dechara. Ha ga na-esochi nke ya ọnọdụ n'oge ego ihu ọma usoro.
Loan processor onye bụ onye na ga-akwadebe gị nnyefe ego ọmụma na ngwa maka ịchụrụ ka nnyefe underwriter. Ha ga-eme ka n'aka na i nwere gụnyere niile kwesịrị ekwesị akwụkwọ, niile na ọnụ ọgụgụ na-gbakọọ n'ụzọ ziri ezi, na ihe niile bụ ihe iji hụ na a na-adọ mkpebi na gị ihu ọma.
Mortgage underwriter onye bụ onye na ga-amata gị eligibility maka ego dabeere na gị Ebe E Si Nweta akụkọ ihe mere eme, ọrụ akụkọ ihe mere eme, akụ, ụgwọ, na ihe ndị ọzọ.
Real ala na ụlọ appraiser onye bụ onye na a ga-enyocha na inwale unbiasedly n'ụlọ gị gị na ihe onwunwe iji chọpụta uru nke ezigbo onwunwe. Ha ga-enyere ndị enyemaka nwere, jikwaa, ere, itinye ego na na ibinye ego na nche nke ezigbo ala na ụlọ.
Mmechi nnọchiteanya ndị bụ onye ga-elekọta na-ahazi mmechi ma ọ bụ “mmezi” gị ego, Dekọọ mmechi akwụkwọ, na-akwụ ego na kwesịrị ekwesị mmadụ na òtù.
Niile nke ndị a ndị mmadụ nwere dị iche iche na-arụ ọrụ ma dị mkpa na gị nnyefe refinancing. Dabere na ha, ịjụ ajụjụ, ma na-echeta na ha na-arụ ọrụ n'ihi na ị.
(akwụkwọ : zillow.com)
2. Kpọkọtanụ onwe gị akwụkwọ maka nnyefe Refinance
Mgbe ị na-izute gị agbazinye mmadụ ego ụgwọ ka ide maka a nnyefe refinance, ị ga-mkpa inye ozi nkeonwe gị, dị ka nnọọ ka i mere maka ụlọ gị azụta. Na akwụkwọ ndị a ga-ekwe ka gị agbazinye mmadụ ego ụgwọ ikpebi gị eligibility, gụnyere gị W-2s, akụ okwu, na tax nloghachi.
Usoro nke refinancing nnyefe dị yiri nnọọ n'ụlọ azụ usoro. Ị na-eke ọhụrụ ego na ọhụrụ okwu ma ọ bụ ọbụna ọhụrụ agbazinye mmadụ ego ụgwọ (ma ị na-eji gị mbụ agbazinye mmadụ ego ụgwọ ma ọ bụ ọhụrụ agbazinye mmadụ ego ụgwọ). Usoro ga-achọ otu akwụkwọ na ozi ị nyere mgbe ị na mbụ zụrụ n'ụlọ gị gị na.
The n'okpuru esonụ akwụkwọ bụ ihe ị ga-enye ndị agbazinye mmadụ ego ụgwọ:
• W-2s site n'oge gara aga afọ, ikekwe abụọ
• Ṅaa ego stubs site n'oge gara aga otu ọnwa atọ
• Gosiri nke ọ bụla yana ego
• Tax akwụkwọ si afọ abụọ gara aga, gụnyere ihe nile peeji nke na schedules
• Ọ bụrụ na onwe ya n'ọrụ, ọ bụ eleghị ị ga-edo a ugbu a afọ uru-na-ọnwụ-na nkwupụta, ndị ọzọ akwụkwọ
• ịlele na ego ụlọ akụ okwu site n'oge gara aga otu ọnwa atọ
• Investment akaụntụ nkwupụta - gụnyere 401(k), ebuka, Ira na nkwanyerịta ego - site n'oge gara aga otu ọnwa atọ
• Nkwupụta niile ụgwọ, gụnyere ụgbọ ala mgbazinye ego, na-amụrụ mgbazinye ego, kaadị akwụmụgwọ na gị ugbu a nnyefe
• Copy gị akwụkwọ ikike ịkwọ ụgbọala
Jaa : oge nke akwụkwọ nwere ike iche na agbazinye mmadụ ego ụgwọ ka agbazinye mmadụ ego ụgwọ
Ọ bụrụ na ị gbara alụkwaghịm, mkpa ka ị na-enye a oyiri nke gị ịgba alụkwaghịm iwu tinyere metụtara alimoni ma ọ bụ nwa nkwado akwụkwọ.
3. Ịghọta Documents Itinye Aka
Mgbe ị zụrụ n'ụlọ gị gị na, ị enyocha na aka ọtụtụ akwụkwọ tupu na na mmechi. Mgbe ị na-refinance gị nnyefe, ị ga-achọrọ ime otu ihe ahụ dị ka nke a bụ ọhụrụ ego na ọhụrụ udu na okwu. Were oge ụfọdụ iji nyochaa na akwụkwọ ndị a ọzọ na ume gị ihe ọmụma.
Nleta Ị ga Lee Tupu mmechi
Edo Residential Loan Ngwa: Nke a bụ otu ihe ahụ nnyefe ego ngwa ị dechara mgbe ị zụrụ n'ụlọ gị gị na, akada isi ọmụma banyere gị, ego gị, na nkọwa nke gị nwere nnyefe. Na a ụdị, ị ga-achọrọ iji nye ihe ọmụma banyere gị kwa ọnwa ego, jikọtara ezinụlọ mmefu, akụ na ụgwọ, na onye ozi dị ka gị nọmba nchekwa ọha na alụmdi na nwunye okwa. Ozi a ga-enyere gị agbazinye mmadụ ego ụgwọ amata gị eligibility ọhụrụ ego.
Ezi Okwukwe atụzi: N'ime ụbọchị ọrụ atọ nke ẹsụk gị dechara ego ngwa, gị agbazinye mmadụ ego ụgwọ ga-enyerịrị gị a Good Okwukwe atụzi (GFE) na obụk gị ego okwu, escrow ozi akaụntụ, na ihe niile na-eme atụmatụ na-akwụ ụgwọ jikọtara ọhụrụ gị ego ahụ ga-abụ ruru na mmechi.
Eziokwu na agbazinye ngosi Nkwupụta: N'ime ụbọchị ọrụ atọ mgbe emecha gị nnyefe ngwa, gị agbazinye mmadụ ego ụgwọ ga-ezitere gị a Eziokwu na agbazinye ngosi nkwupụta. A ngosi agụnye ngụkọta ego a na-ego, gị ego ụgwọ, gị Kwa Afọ Pasent Rate (gụnyere mmasị ọnụego, ihe, ore ahia ego, na ndị ọzọ na-akwụ ụgwọ), na ịkwụ ụgwọ gị oge. Gị agbazinye mmadụ ego ụgwọ ga-enye gị emelitere version gị Eziokwu na agbazinye ngosi na mmechi.
Ke mbubreyo 2015, lenders ga-amalite iji ọhụrụ Loan atụzi Ụdị na-agwakọta ọmụma ugbu a na GFE na Eziokwu Na agbazinye ngosi
Ihe Kasị Mkpa Forms Ị ga Banye na mmechi
HUD-1 Settlement Nkwupụta: Kii a na akwụkwọ na-enye niile nke ahụ n'ezie ụgwọ, akwụ ụgwọ na Ebe e si nweta metụtara mmechi gị ego. Ị nwere ikike na-enweta ndị HUD-1 mmezi nkwupụta maka nyochaa 24 awa tupu gị mmechi. Ọ dị mkpa iji nyochaa HUD-1 ọma iji hụ na ị na-edebanye aha maka na mbinye ego ị kwetara. Na peeji atọ nke HUD-1, ị ga-ahụ na tebụl na-enye gị ohere ọsọ ọsọ na mfe tụnyere atụmatụ gị GFE ahụ n'ezie na-akwụ ụgwọ.
The Promissory Cheta: Nke a bụ akwụkwọ iwu ị banye n'ikwere akwụghachi na mbinye ego dị ka okwu nke ị kwetara. Ọ obụk nkọwa nke ego, na ụbọchị mgbe ịkwụ ụgwọ ndị na-mere na ebe ịkwụ ụgwọ na-ka e ziga. Ọ na-akọwa ihe nwere ike ime ma ọ bụrụ na ị na-ada na-eme ka a ugwo na oge.
N'omume nke Trust: Site na ịbanye akwụkwọ a, ị na-enye ndị agbazinye mmadụ ego ụgwọ nri na-azụ ihe onwunwe site nnapụ n'ike kwesịrị ị na-ada na-akwụghachi gị ego dị ka kwetara. Akwụkwọ a na-akọwakwa gị ikike na ọrụ dị ka a na-agbaziri agbaziri.
N'omume nke Trust: Na-ere ere ga banye n'omume nyefee nwe n'aka gị, ọ ga-aha ndị nile ndị na-azụ na ya. Gị aha ga-ẹkenịmde na a-atọ ndị ọzọ trostii ruo mgbe ị kwụrụ maka ụlọ na zuru. Ị ga-enweta a oyiri nke n'omume na mmechi.
Affidavits declarations: Ndị a bụ okwu na-akpọsa ọmụma nile i nyere bụ eziokwu, gụnyere na onwunwe ga-gị isi obibi na ihe niile di mkpa na ihe onwunwe e mere tupu mmechi.
4. Ịchọpụta na-akwụ ụgwọ
Refinancing gị nnyefe nwere ike ịzọpụta gị ọtụtụ narị dollar kwa ọnwa, Ma tupu i amaba n'ime mmiri, ọ dị mkpa na ị maara ihe nile metụtara akwụ ụgwọ. Ị ga-achọ na-arụ ọrụ anya na gị agbazinye mmadụ ego ụgwọ ime a na-eri-uru analysis na-ekpebi ma refinancing na-eme ka ego uche maka ị.
Tagged on: nnyefe Refinance refinance Refinance nnyefe refinancing
← 3 Usoro ị ga-eme ma ọ bụrụ na ị chọrọ kwụọ ụgwọ i Mortgage Na 7 Afọ ma ọ bụ Naa (1) | nnyefe, Refinance nnyefe, kwụọ nnyefe, ụgwọ free, nnyefe mkpochapu
Ịzụ a n'ụlọ na ego ma ọ bụ na a nnyefe | nnyefe, mortgages →